Dowlada S/L waa inay ku dhawaaqdo awood la’aan … « CEELBARDAALENEWS.COM
« Xildhibaan A/Yasin Ayaane oo shir jaa’id ku qabtay Hargaysa.
Baac Ku socda dhamaan xildhibanada iyo Madaxda Gadabursi ee ku jira Maamulka Cunsiriyada ee Isaaq. »
Dowlada S/L waa inay ku dhawaaqdo awood la’aan …
July 26 – Warar shalay Gabilay nagasoo gaadhay, islamarkaana la isla dhexmarayay magaalada Borama ayaa waxay sheegayeen in rasaas laga maqlay magaalada Gabilay dhexdeeda. Dad xilkas ah oo noogasoo waramay Gabilay iyo Borama ayaa sheekay markaan sii daba galnay siday wax u jiraan in qaar ka mid ah dadqalatadii soo galeen magaalada Gabilay yaga oo rabay inay raashin iyo qaad ka qaataan. Markii la ogaaday waa siday wararku sheegeene ayay booliiska gabilay daba galeen kadibna rasaas la maqlay. Taasi waxay cadaynaysaa rasaasta ay dadku sheegeen ee odhanaysa inay rasaasi ka dhacday magaalada Gabilay dhexdeeda.Siday wararku sheegayaan islamarkaana booliiska Gabilay ku dacwiyayo, wax ay qabteen male booliisku. Waxayna sheegayaan inay daba galeen yaga oo rabay inay qabtaan hase yeeshee ay u suuro gali wayday oo sidaa ay ku baxsadeen dadqalatadii.
Si walba ha ahaato, waxa muuqata inayna booliisku rabin qabashada dadqalatada sobobta oo ah aduun waynaha fayow dad jabiyay qawaaniin oo magaalo soo gala, booliisku arko oo dhib yaraan ku baxa ma jirto. Arimaha shalay ka dhacay Gabilay waxay muujinayaan inayna booliiska Gabilay rabin in dadkooda la qabto. Waxayna u muuqataa inay waliba booliisku siinayaan taageero dadqalatada. Siday waraku sheegayaan booliisku markay ogaadeen in shicibka reer Gabilay (inta ay ku hadhay dad nimadu ee wali fayow haysana dhaqankii Soomali lahayd) lasocdaan soo galitiinka dadqalatada ay u baqeen. Sidaa darteed rasaasta ay u rideen siina galbiyeen intay dadqalatadu ka baxayeen magaalada.
Waa maalintii 16naad ee dadqalatadii xunka ahayd ay maqanyihiin. Ilaa maanta wax war ah amma hadal ah amma lagu talo jiro oo dowladu ka tidhi arintaasi ma jirto. Ku darsoo sida shalay xaqiiq noqotay dadqalatadu hareerta Gabilay ayay joogaan oo waa kuwaa soo doontay qaadka. Su’aashu waxay tahay halkay ka dhacday wixii la odhan jiray dowlada Somaliland. Ma ruwaayad dadka loo dhigayay bay ahayd. Dowlada inna wareerisay 18 sanadood een moodaynay wax aan wada dhisanay oon wada ilaashanayno ma waxay ahayd dowlad si gaar ah ay u leeyihiin Jibriil Abokor.
Nabadii aan ugu faanaynay koonfurta Soomaaliya ma waxay ahayd mid ay Jibril Abokor hayaan oo markay rabaana nabadi jirto markay rabaana dadka qashaan? Maxaase ku dhacay heshiiskii qabaailka Somaliland ee ahayd in lawada ilaashado nabada kii dumiyana meel laga wada maro si loo badbaadiyo wakhti walba nabada dhexdeena. Ma Jibril Abokor baa ka diiga dunida Somaliland?
Su’aal kale hadii aan iswaydiino, siday wax u dhici lahaayeen hadii ay dadqashaan qabiilooyinka kale siibana Samaroon??? Ma laga aamusi lahaa arintaa?? Wax ma laga qaban lahaa arintaa??? Ma daganaan lahaa wadanku??? Siday aniga ila tahay marnaba arimuhu sida maanta ay u dhacayaan uma dhaceen…
Dowladeenii ku faanaysay wakhti walba inay Afrikada u horayso xaga amaanka iyo is ogolaashaha shicibka iyo qabiilooyinka ma waxa ka biyeeyay Jibriil Abokor oo daaqada ka tuuray amaankii oo ku faanay waykaa ee cidi wax ha iga qaado?
Dowladii Samaroonka u diiday inay dakadahooga wax kasoo dajistaan ee awooda lahayd ma waxa ka biyeeyay Jibriil Abokor oo awoodii ka qaaday?
Dowladii boqolkiiba sagaashan uu barlamaanku Isaaq uu ahaa, 100% Isaaq uu ahaa golaha cadaalada (Somaliland Justice), ee 95% Isaaq uu ka ahaa shaqaale, ee 94% Isaaq uu ka ahaa ciidamada nabada – – Ma waxa ka biyeeyay Jibril Abokor oo sheegtay inay dowalduba yaga tahay?
Dowladii uu Isaaqu ka wasiirada ahaa 99%, ma waxay ku dambaysay inay Jibril Abokor awoodii ka qaado?
Dowladii uu Isaaqu diiga ka ahaa ee odhanaysay anagaa ka talinayna aduunka ma waxa ka biyeeyay Jibriil Abokor oo jilib ka ah Isaaq oo raba inay wixii lagu daalay ku tuntaan?
Wixii uu ku daalay Madaxwayne Rayaale ee aduunka uu ugu baaqay in Somaliland la ictiraafo, ma Jibril Abokor baa ku ciyaaray oo khasaarshay dadaalkii madaxwaynaha?
Rajadii aan qabnee odhanaysay bari bay arinteena dowladnimo hagaagi ma waxa beeneeyay Jibriil Abokor oo mugdi habeena galiyay oon soo noqod lahayn?
Waxa kor ku qoran oo dhani waxay muujinayaan inayna maanta wax dowlad Somaliland la yidhaahdo jirin hadii ay jirtana bilowday socodkii dhamaashaha. Laba uun baa u gudboon dowalda Somaliland siibana Madaxwayne Rayaale;
. In uu awoodiisa madaxwayne muujiyo oo uu meel mariyo qawaaniinta u dagan wadanka si ay ku dhacdaba, lasoo qabto dadqalatada, sharcigoogana la mariyo
. In uu ku dhawaaqo inuu iska dhiibay xilka kol hadii ay dowaldnimo ku dambaysay qabiilo si aan u bilowno inaan is wada qalano cidii xoog roonina dhulka u hadho.
Sharafta iyo magaca madaxnimo arimahaas bay ku jiraane Madaxwaynow waan ku sugaynaa….
Suleima Abdi Dugsiiye
This entry was posted on July 27, 2009 at 8:18 am	and is filed under 1. Tagged: 1. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.